Ogaden News Agency (ONA) – Dhaq-dhaqaaqa Cabdi iley ujeedada ka dambaysa iyo aragtida JWXO
Dhaq-dhaqaaqa Cabdi iley ujeedada ka dambaysa iyo aragtida JWXO
Posted by ONA Admin	/ January 6, 2012
Waxaa dhawaanahan la hadal hayaa in gacan-ku-dhiiglaha Ogaadeenya Cabdi Ilay uu socdaalo dhulka ku marayay dagmooyin ka tirsan gobolada Jarar iyo Qorahay .Isagoo isgarab wada sawir qaadayaal iyo brobagaanda ujeedooyin badan uu ka leeyahay gumaysiga.
Dada badan ayaa isweydiinaya waqtiga lagu soo beegay dacaayadan iyo ujeedada ay xambaarsan tahay. Inkastoo mawqifka JWXO aanay waxba ka badalaynin dacaayadaha gumaysiga oo soo taxnaa tobanaanka sano ee loola jeeday mudadaa in dadweynaha iyo caalamka laga iibiyo waxaan jirin oo ah JWXO waan ka sifaynay dalka oo anagaa ka talina, hadana xaqiiqda dhulka taala dadweynaha gudaha iyo caalamka dibadda ee u dhuun-duleela arimaha Geeska Afrika intaba way ogsoon yihiin in aanay waxba ka badalaynin dacaayad iyo sawiro xayaysiin ah.
Ciidamadii gumaysiga ee xooga ku qabsaday dalka Ogaadeenya inay weli xeryo ku leeyhiin dalka uma baahna daliil oo waa la ogsoon yahay. Joogitaan ciidan iyo dhaqdhaqaaq uu ka dhex sameeyo dal uu haysto macnaheeda ma’aha in laga ogol yahay ama uu nabad ku dhex joogo. Ciidanka Mareykanka oo ah quwada ugu xooga badan caalamka maanta ayaan ogsoonayn siday u dhex mushaaxayeen intay dheg joogeen Vietnam, Iraq iyo Afghanistan hadda. Maxay ahayd xaqiiqada ay ku dhex socdeen. Waxba kama duwan dhex jooga ciidamada Itobiya Ogadenya iyo dhex marinta Ina Ilay ee loogu talagalay dacaayadda, joogitaanada ciidamada gumaysiga dalalkii ay xooga ku joogeen.
Waxaana hubaal ah inuusan qofna shaki uga jirin, gumaysigana uu ogsoon yahay in CWXO uu si xoog badan uga hawl galo dalka Ogaadeenya, isaga oo cadawga ugu gaysta khasaare joogto ah oo maalin kasta ah sidaad ku aragteen warbixin sanadeedkii dagaaladii 2011kii kuwaas oo qiyaas ahaan maalinkii ka dhigaya inay dhacaan ugu yaraan laba dagaal. Sababta ugu weyn ee Itobiya ay saxaafadda caalamka uga mamnuucday inay tagaan gudaha Ogadenyana waa midaa. Sidaa darteed CakaaraTV waxba kama badalayso qorshaha CWXO u dajisan iyo ahdaafta JWXO iyo aragtida halgamaaga toona.
Marka la’is barbardhigo dhaqdhaqaaqa ciidanka JWXO iyo cududa uu ku dhex joogo dalka iyo sawirada Cabdi ilay ee loogu talagalay dacaayada dibadda ayaa qofka la yaaba uu is-weydiinayaa xagey aadeen ciidankii xoogaa lahaa ee ONLF?
Warbixin yar hadaan ka siino qofka siyaabahaa ay wax isu tusaan, ugu horeyn socdaalkan Cabdi ilay waa mid ay diyaariyeen madaxda ciidamada cadawga oo looga dan leeyahay borobagaando iyo in la abuuro sawiro aan waaqica dhabta ah ka atrjumaynin oo lagu khaldo jaaliyadaha dibadaha ku nool ee ka fog xaqiiqada dhulka taala, si ay su’aal uga keenaan awooda CWXO iyo hanashadiisa dalkla.
Waxrbixnada dhabta ah ee CWXO ay ka soo diyaariyeen arinta waxay tahay; Cabdi ilay wuxuu ku dhaq-dhaqaaqaa diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo ay leeyihiin ciidamada milatariga ah taasoo intay Jigjiga toos uga soo kacdo dagaysa qaar ka mid ah tuulooyinka dhowr boqol oo mitir ka hor, ka dibna sawir qaadayaasha ayaa soo sawiraya Cabdi iley oy la socdaan dad xoolo dhaqata ah oo la diyaariyay oo laga dhigayo inay masaafa dheer soo socdaaleen. Guud ahaan safar dhuleeduu maro Cabdi ilay ma jiro, gaar ahaan dacaayadda hadda socota. Waxaana meesha uu tagayo oo aad loo qariyay la geeyaa ciidan laxaad leh oo ilaaliya wareeg dheer inta uu joogo halkaa oo laga duubayo sawirada dacaayadda ah.
Waxaa jirta meelaha ay u suuro gali waydo inuu tago laga soo qaado sawiro qarsoodi ah islamarkaa backround looga dhigo muuqaalo laga qaaday Cabdi ilay, taasina ma’aha wax lala yaabo oon suurtagal ahayn anagoo ogsoon horumarka laga gaadhay technology-ada filim samaynta.
Xaqiiqada dhabta ahi waxa weeye inaan maanta la joogin xilli uu gumaysiga iyo kuwa u adeega ku dhex mari karaan dalka Ogaadeenya hadba siday doonaan, waase dhici kartaa inuu mar ama laba jeer si dhuumasho ah ku maro meelo kooban oo aad loo ilaaliyay.
31 October ayay ahayd markii isaga oo maraya deegaanka Dhagaxmadaw lagu helay halkaas oo lagaga laayay in ka badan 30 Askari oo ka mid ahaa ciidamdii la socday wuxuuna ku baxsaday faracaaradood, taasina waxay ina xusuusinaysaa in markay doonaan CWXO ay weerari karaan Wayaanaha iyo maxaysatada la socda ee ku hareereysan. Weerarada ay qaadayaan CWXO laguma saleeyo dacaayad iyo ka hortag dacaayadaha gumaysiga toona. Hadaf ka weyn ayuu ku socdaa oon ahayn marxali.
Warar aan ka helay dad xog ogaal ah ayaa sheegaya in socdaalkan uu yahay mid ay diyaariyeen saraakiisha ciidanka gumaysiga oo dhaliila badan loo soo jeediyay ka dib markii la xaqiijiyay in aanay awood muuqata ku lahayn gudaha Ogadenya. Si kastaba ha ahaatee, Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF) iyo naftood-hurayaasha CWXO, dacayadaha noocan ah waxba kama badalayso qorshaha u dajisan. Cabdi iley haduu dhex tago tuulooyinka qaarkoodna, ma ahaanayo hadaf weyn oo hawlgaladii CWXO u qorshaysnaa wax ka badalaya.
Waxaa kaloo cusub hadda inuu meelaha lagu murmo ee Paltalk-yada uu Cabdi Ilay maalmahan ka hadlayay isagoo sheegaya inuu joogo ceelka Bulaale. Dacaayadaha noocan ah waxay si dhab ah uu muujinayaan arintii aan horey ku soo tilmaanay ee ahayd in laba filim la’isku daro, sababtoo ah qofkasta wuu ogsoon yahay in miyiga Ogadenya iyo ceelka Bulaale toona aanay ka jirin koronto iskaba daa Internet. Arimaha Paltalk-yada waan ogsoonahay inay kooxda Ajo-gudhay aad u adeegsan jireen oy dadweynaha u jibaysan dhagaysiga diinta ay ku hayi kicin jireen ka dibna waa tay kaga urursan jireen maaliyad xoogan.
Gabagabadii dadweynaha Ogaadeenya ee dibadaha ku noo waxaa muhiim ah inay barataan joqoraafiga dhulka Ogaadeenya iyo xaaladda uu dalka ku sugan yahay, taasoo idinka caawin karta inaad qiyaas rasmi ah ku samaysaan daacayadaha beenta ah ee gumaysiga ugu talagalay inuu jaaliyadaha ku jawaraeeriyo.